Okulandelayo | Iphepha Elimhlophe
I-Cheryl Cran NextMapping ™
Zama Inkambo Yamahhala
Inqubo ye-NextMping ™
Imicimbi Ebukhoma Nezindawo Zokukhosela
Ikhosi entsha ye-Inthanethi
Ungawakha Kanjani Futhi Uthuthukise Ngejubane Loshintsho
Bheka Zonke Izikhathi Zokusebenza Ezisebenza Ngekusasa Lomsebenzi
Amakhono Amasha Adingwa Abasebenzi Ukwenza I-Course - $ 79 Thenga Manje
Okulandelayo™ Ikusasa Lamaphepha Amhlophe Omsebenzi
Kwa-NextMapping senza ucwaningo oluqhubekayo ngazo zonke izinto ezizayo zomsebenzi. Amaphepha wethu Amhlophe afaka ucwaningo nge-AI, ezenzakalelayo namarobhothi kanye nezinselelo zomsebenzi ezibhekene namabhizinisi namuhla.
NEW! I-20 ye-Work Work Trends ye-2020 ephezulu ye-XNUMX
Ikusasa le-20 ephezulu ye-Work Trends 2020
E-NextMapping™ ucwaningo lwethu lususelwa ohlakeni lwethu lobunikazi, imodeli ye-PREDICT echazwe kumthengisi othengisa kakhulu, "I-NextMapping - Lindela, Zula futhi Wenze Ikusasa Lomsebenzi."
Imodeli ye-PREDICT iqukethe izigaba ze-7 zokungena kwemigwaqo ukunikezela ngemininingwane yokuhola kwabaholi, amaqembu kanye namabhizinisi. Imodeli ye-PREDICT inikela ngohlaka lokusiza ukudala ikusasa elitsha lomsebenzi elihambisana namasu nezenzo zamanje.
Lo mbiko uveza ucwaningo kanye nokuthi INDLELA yokusiza abaholi, amaqembu, osomabhizinisi kanye namabhizinisi ukwakha ikusasa!
Ukucabanga kabusha Ukuqashwa Nokugcinwa Kwesikhathi Esizayo Somsebenzi
Enye yezinto ezigxile kakhulu kumabhizinisi e-2019 nangale kwe-2020 ukuthola, ukuqasha nokugcina abantu abalungile.
Abaholi baphonswa inselelo yokuthola abanamakhono kakhulu futhi abalungele ukusebenza ngabantu. Abaholi baphinde baphonswe inselelo yokuthi bangabagcina kanjani abantu abanamakhono.
Iqiniso ukuthi abaholi manje bancintisana nezinto eziningi maqondana nokuqashwa - umncintiswano akuyona nje ezinye izinkampani, ngabasebenzi uqobo.
Amasu asebenze iminyaka ngeke asebenze manje noma ngokuzayo. Izimo ziyaguquka futhi lesi sizukulwane sabasebenzi asibheki kangako 'ngemisebenzi' noma 'imisebenzi' njengoba bafuna amaphrojekthi anenjongo, amathuba wesikhashana, amathuba okusebenza okwabelwana ngawo, umsebenzi okude nokuningi.
Kuleli phepha elimhlophe lamahhala, sinikezela ngemininingwane, ucwaningo kanye nama-anecdotes ukuthi ungaba kanjani onqenqemeni lokuqasha nokugcina ithalente eliphakeme.
Uma amaRobhothi eyiKusasa Lomsebenzi - Yini Okulandelayo Ngabantu?
Ama-futurists amaningi agxile ekubukeni kwe-dystopian ngekusasa lapho sizobe sisebenza khona futhi siphila ngokoqobo lwamarobhothi angabantu.
Kukhona nokucwaninga okuqinisekisa ukuthi thina njengabantu singanquma ukuthi sisebenzisa kanjani amarobhothi, ama-automation ne-AI futhi kithi kuthina ukusebenzisa ubuchwepheshe obusha ukudala izimpilo ezingcono futhi sisebenze amaqiniso kuwo wonke umuntu osemhlabeni.
Leli phepha elimhlophe linikeza womabili amaphuzu wokubuka futhi likuvumela ukuthi uthathe isinqumo ngekusasa ofuna ukulenza.
Yiba onqenqemeni oluholayo!
I-NextMping ™ inqubo yethu yokuphathelene esiza izinhlangano, abaholi, amaqembu kanye nabosomabhizinisi ukukhulisa amandla abo okuhamba ngekusasa futhi babe nekusasa lomsebenzi selilungile manje.
Isikhuthazo, ulwazi olufundisayo nolusebenzayo lwezinombolo zomsebenzi owenzelwe izidingo zakho ezihlukile.
Ikusasa lakamuva locwaningo lomsebenzi nedatha.
Ngabe wena nenkampani yakho kusasa nilungele? Thatha le mibuzo emifushane ukuthola.
Ikusasa Lokwenza izifundo online
Ukufunda online nge-ozikhethela umqeqeshi ukusekela abaholi ukukhulisa amakhono abo ukuze babe ikusasa ukulungele manje.
Singathanda ukuzwa kusuka kuwe
Xhumana nathi kwezenhlalo
© Copyright UCheryl Cran I-2021 | Inqubomgomo yobumfihlo